Iindaba -Ubambiswano lwezoQoqo oluBanzi lwezoQoqosho (i-RCEP)
Ubambiswano lwezoQoqo oluBanzi lwezoQoqosho (RCEP)
Olu luloyiso lwamazwe amaninzi kunye norhwebo olukhululekileyo. Ubhubhane usasazeke kwihlabathi liphela, urhwebo lwamanye amazwe kunye notyalo-mali luye lwancipha kakhulu, unikezelo lwezinto ezithunyelwayo kwimizi-mveliso luthintelwe, kwaye ubumbano lwezoqoqosho luye lwahlangabezana ne-counter current, kwaye i-unilateralism kunye nokukhuseleka kuye kwanda. Onke amalungu e-RCEP enze ukuzibophelela ngokudibeneyo ukunciphisa iirhafu, ukuthengisa okuvulekileyo, ukunciphisa izithintelo, kunye nokuxhasa ngokuqinileyo ubumbano lwezoqoqosho. Ngokwokubalwa kwetanki lokucinga lamazwe aphesheya, i-RCEP kulindeleke ukuba iqhube ukonyuka kwe-519 yezigidigidi zeedola zaseMelika kumazwe angaphandle kunye ne-186 yezigidigidi zeedola zaseMelika kumvuzo welizwe ngonyaka ngo-2030. Ukutyikitywa kwe-RCEP kubonisa ngokupheleleyo isimo esicacileyo sawo onke amalungu Amazwe ngokuchasene nobumbano kunye nokukhuselwa. Ilizwi elihlangeneyo lokuxhasa urhwebo olukhululekileyo kunye nenkqubo yorhwebo yamazwe amaninzi ifana nokukhanya okuqaqambileyo emafutheni kunye nomsinga oshushu kwimozulu ebandayo. Iya kukonyusa ukuzithemba kwawo onke amazwe kuphuhliso kwaye ifake amandla aqinisekileyo kwintsebenziswano yokulwa ubhubhane wamanye amazwe kunye nokubuyiselwa kwezoqoqosho kwihlabathi.
Ukukhawulezisa ulwakhiwo lomgangatho ophezulu wenethiwekhi yendawo yasimahla yorhwebo
Ubambiswano lwezoQoqo oluBanzi lwezoQoqosho (i-RCEP), oluqaliswe ngamazwe alishumi e-ASEAN, lumema i-China, i-Japan, i-South Korea, i-Australia, i-New Zealand kunye ne-India ukuba zithathe inxaxheba ("10 + 6 ″).
"IsiVumelwano esiDibeneyo sokuBambisana kwezoQoqosho" (RCEP), njengesivumelwano kurhwebo kwingingqi yeAsia-Pacific, siza kuvelisa isiphumo sorhwebo. Ukugxila kumzi mveliso wehlabathi wokuvelisa, imodeli ye-GTAP isetyenziselwa ukulinganisa ifuthe le-RCEP kwicandelo lezabasebenzi kushishino lokuvelisa, kwaye kufunyenwe ukuba i-RCEP inefuthe elibonakalayo kwicandelo labasebenzi kwishishini lokuvelisa lehlabathi. Ukugqitywa kwayo kuyakuqinisa ngakumbi isikhundla sommandla waseAsia emhlabeni; I-RCEP ayizukukhuthaza kuphela ukuveliswa kwamaTshayina Ukonyusa ukuthunyelwa ngaphandle kwemizi-mveliso kunye nokwanda kwesabelo sentengiso sehlabathi nako kuluncedo ekunyukeni kwikhonkco lexabiso lehlabathi.
Umdibaniselwano wokudityaniswa koqoqosho lwengingqi okhokelwa yi-ASEAN luhlobo lombutho lwamazwe angamalungu ukuba avule iimakethi komnye nomnye kwaye enze umanyano loqoqosho lwengingqi.
Ngokunciphisa iirhafu kunye nezithintelo ezingezizo zerhafu, misela isivumelwano sokurhweba simahla kunye nentengiso emanyeneyo yamazwe ali-16
I-RCEP, umbono omuhle, ikwayinxalenye ebalulekileyo yesicwangciso selizwe lam, kwaye sinokulinda kuphela!